Home » LGBTQ » IGLTA dia namerina nanamboatra ny fivoriambe Milan Global tamin'ny 2022
The Fikambanan'ny Travel LGBTQ + Iraisam-pirenena dia nanamafy fa hitondra ny Fihaonambe Iraisam-pirenena Iraisam-pirenena faha-38 any Milan amin'ny 2022. Ny fivoriambe, ny hetsika fanabeazana sy tambajotra voalohany ho an'ny fizahantany LGBTQ +, dia nokasaina hatao tao Milan 6-9 Mey tamin'ity taona ity, saingy nahemotra noho ny ny Coronavirus areti-mifindra.
"Manana fiaraha-miasa maharitra sy mahomby amin'ny Italia sy ny Tanànan'i Milan izahay, ary ny talen'ny talen'ny IGLTA dia manolo-tena hanome voninahitra ny tolo-kevitry ny fivoriambe nandresy sy hitazonana azy ireo ho iray amin'ireo tanàna fandraisam-bahinay malaza," hoy ny filoha / CEO an'ny IGLTA John Tanzella . “Hiavonavona be izahay amin'ny fampiroboroboana an'i Milan, tanàna mpandray vahiny LGBTQ + lehibe indrindra any Italia, ao anatin'ny roa taona ho avy ary mizara ny toerana itodiana amin'ireo matihanina momba ny dia amin'ny taona 2022.”
Ny tetik'asan'i IGLTA ho an'i Milan dia niasa nandritra ny roa taona niaraha-niasa tamin'ny ENIT (Italian National Tourist Board), ny Tanànan'i Milan, AITGL (Fikambanan'ny Fizahan-tany ho an'ny gay sy lesbiana italiana) ary ny orinasam-pitetezana SPress & Beach. Nanatanteraka fivoriana virtoaly marobe ireo mpandray anjara mba hifanakalo hevitra momba ny safidy, farany namarana ny drafitra hanemorana ny hetsika hatramin'ny 2022, fa hitazona izany any Milan.
"Heveriko fa misy faniriana lehibe ny hiverina indray," hoy i Maria Elena Rossi, talen'ny varotra sy fampiroboroboana ny ENIT. “Ny fomba fanazavantsika vaovao momba ny fizahantany dia mifototra amin'ny kalitao, amin'ny traikefa misy eo an-tanàna sy ny manodidina. Ao amin'ny 2022, ireo mpanatrika ny IGLTA dia hahita vokatra vaovao kokoa, noho io fotoana io. Ary ny ENIT dia hanohy hampiasa vola amin'ity hetsika ity sy amin'ny hetsika hafa, ao anatin'ny marketing stratejika mitohy. "
Roberta Guaineri, Mpanolo-tsaina ho an'ny fizahan-tany ho an'ny tanànan'i Milan, dia nanampy hoe: “Hanomboka ny drafitra sy ny fampiroboroboana indray izahay amin'ny hery mitovy amin'ny amin'ny 2019, satria mila manasongadina ny lafy tsara izahay. I Milan dia tsy tanàna azo antoka, fa tanàna ihany koa izay avo ny kalitaon'ny tolotra sy ny fandraisana, tanàna iray misokatra ho an'ny vahiny rehetra. "
Hatramin'ny 1983, ny fivoriambe fanaon'ny IGLTA dia teo amin'ny lisitra tsy maintsy atrehana ho an'ny marika fitsangatsanganana liana amin'ny tsenan LGBTQ +. Ny hetsika dia manome fahitana lehibe ho an'ny tanàna mpampiantrano miaraka amin'ireo matihanina momba ny fizahantany LGBTQ + manerantany, ao anatin'izany ny mpanolo-tsaina momba ny dia, ny mpikirakira fizahan-tany, ny influencers ary ny solontena avy amin'ny hotely sy toerana itodiana. Ny hetsika dia tsy natao tany Eropa hatramin'ny 2014 tany Madrid.
Ankoatry ny fampisehoana ny fahafahan'ny fizahantany LGBTQ + any Italia, ny fivoriambe dia manararaotra manokana an'i Milan sy i Italia haneho ny fisokafan'izy ireo sy ny fanohanan'ireo mpandeha LGBTQ +, hoy ny masoivohon'i IGLTA ho an'ny Alessio Virgili, Italia, izay mitantana ny Sonders & Beach ary koa filohan'ny AITGL. Virgili no nitarika ny fikasana nahomby hitondra ny Fivoriambe Iraisam-pirenena IGLTA any Milan.
"Naharitra ny fiaraha-miasa lehibe nandritra io vanim-potoana io, satria maharitra ny drafitra hetsika tahaka izao, ary misy mpiara-miasa sy fizotra maro," hoy i Virgili. “Mbola matoky aho fa ny fivorian'ny IGLTA any Milan no ho lehibe indrindra natao tany ivelan'i Etazonia.”
Ny Fifanarahana Iraisam-pirenena Iraisam-pirenena an'ny IGLTA dia efa voalahatra talohan'ny fanemorana an'i Milan ary hatao any Atlanta, 5-8 Mey 2021.